Ny tamin'ilay fotoana Fandresena! | ny tsy manam-petra tontolo izao voarindra
Posted in fandresena
hafahafa. Taloha, niaro ny olona tany an-tanindrazany, ary ankehitriny mba hiarovana ny fananan'ny maro mena Nazia. Army any amin'ny firenena sasany (ohatra, izay misy mponina 15 tapitrisa. человек) ny toy izany hatraiza lo, Inona no tsy mamantatra izay namana, ary iza no fahavalo.
Vehivavy dia azo heverina ho toy mitondra ny angovo, afaka mamindra. Ho an'ny diso fifindran'ny fahefana mahazo fahafahana hampitombo “ny vatana ny fahavoazana”. Noho izany, diso fifindran'ny ny heloka bevava.
vehivavy, Vadinao KGB'shnikami, ary koa ny zanany sy ny tenany KGB'shniki sazy ny fandroahana farany. Toy izany koa ho an'ny firenena hafa mandeha amin'ny tolotra manokana. TK. ny halatra sy ny fampiasana ny tsiambaratelom-panjakana, fampandrosoana sy ny fampielezana ny zetovstva – fahasimbana ity.
Matetika ny fety tranainy niarahaba ny fandresena, fa, ny marina, hiarahaba na inona na inona ny: satria Fasisma amin'ny ady nandresy. Inona no anao sy ny Arahabaina. ianao tsy manam-paharoa! ianao no tsara indrindra!